Izizathu ezi-4 zokuthi kungani kuyisikhathi sokwakha i-paradigm entsha yobudlelwano ngokususelwa othandweni nasekuhloniphe. — BiologiqueLife
Izizathu ezi-4 zokuthi kungani kuyisikhathi sokwakha i-paradigm entsha yobudlelwano ngokususelwa othandweni nasekuhloniphe.
Noma ngingumuntu othanda amasiko athile, angiyena fan wokuqhubeka namasiko angabasizi futhi abaqinisayo. Njengomuntu osecishe washada kabili futhi wabuza ezinye izikhathi ezimbalwa kunalokho, ngokweqiniso angiqinisekile ukuthi ngizoshada. Engikulungele.
Isikhathi esiningi lapho ngikusho lokhu ngokuzwakalayo kumuntu othile, baphendula ngokuthi, 'Ungasho njalo!' - kungathi ukungashadi kuyisiqalekiso. Uma ngingowesifazane ongashadi, ngikulungele lokho ngoba izindinganiso zomlingani engifuna ukushada naye ziphakeme. Futhi, uma ngingatholanga umuntu ohlangabezana nalokho okulindelwe kule nkathi yokuphila, ngingcono ngaphandle kwalokho.
Ngisanda kukhunjuzwa ngokwenzeka lapho sihlala futhi sinikela ngaphezu kwalokho esikutholayo, sikhathala. Bengikhathele kakhulu ubudlelwano bami bokugcina, okwamanje, angisakwazi nokukhuluma naye. Umcabango wokumbona uyangixosha. Kepha akuyena yedwa okufanele asolwe. Ngihambisane nemicabango yami nenhlalonhle ejwayelekile ngenxa yesiko. Okungukuthi, angisoze ngakwenza futhi.
Nazi izizathu ezine zokuthi kungani sidinga ukudala i-paradigm entsha yobudlelwano ngokusekelwe othandweni nasekuhlonipheni:
1. Iparadigm endala yobudlelwano ayisebenzi.
Ngaphandle kokuthi uhlala emhumeni, kufanele wazi ukuthi sigcwala kanjani ngamahlebezi osaziwayo noma imibhangqwana eyaziwayo ehlukana.
Ngokwalokho engikubonile nengibonile, ezimeni eziningi, indoda ikopela umuntu wesifazane futhi kufanele anqume ukuhlala noma ukuhamba. Impendulo ejwayelekile kulokho ukuthi, 'Amadoda azoba amadoda.' Yiliphi isiko lakudala. Umbono wokuthi umuntu angakwazi ukuguqula ngokususelwa ekukhulisweni kwakhe awunangqondo. Ngoba uma umuntu emthanda ngokweqiniso omunye, bayovuka babe ngumuntu ongcono kumlingani wakhe noma bavumele omunye wabo obalulekile ukuthi athole omunye umuntu ongeke aqhubeke nokubalimaza. Ngiqedile ukuzwa, 'abafana bazoba ngabafana' noma 'amadoda akopela' ngoba lokho kwehlisa kuphela amazinga wohlobo lwabantu okufanele sifise ukuba yilo. Abantu abahloniphayo futhi badala ukuthula ezimpilweni zabanye.
2.Izindima zobulili ziyaphela.
Akumele ube ongashisi kanambambili ukubona ukuthi umbono wakudala wobudlelwano bendoda nowesifazane awusebenzi. Sake sathengiswa isithombe- somndeni ophelele wendoda sibona owesifazane amthandayo futhi amenza owakhe. Owesifazane ube esechitha ubudlelwane emgcina noma ephoqa ukuthi ashintshe. Lokho kwaba ubuhlobo bami bokugcina. Futhi, engikufundile ukuthi konke kuyisihibe. Kuyindlela nje yokugcina idrama nezinkinga ezungezile ngoba othile uzohlala ecasule enye. Engihlangabezane nakho ngokuba yisimo sothando esinjengalesi, ukuthi izindlela ezilinganayo zilingana. Ubudlelwano obuphilile buthuthukisa ukulingana nenhlonipho, hhayi ukuthi ngubani onemali ethe xaxa, othola izingane, owaziwa kakhulu, owenza okuningi noma owazalwa owesilisa noma owesifazane. Zisuselwa othandweni nasekuhlonipheni.
3. Ukwethemba kufanele kufike ngaphambi kokuvikelwa.
Uma ngikhuluma nabantu abaningi ngobudlelwano, ngiphatheka kabi. Kuyangiphatha kabi ukuthi iningi labantu lingena ebudlelwaneni noma emishadweni lilindele okubi kakhulu futhi lidinga ukuzivikela. Ngake ngaba khona phambilini, lapho ngangesaba ukuthi izinto zizolunga nomuntu engimthanda kakhulu. Ngenxa yalokhu kwesaba, ngizamile ukulawula omunye umuntu ukuthi bazohlala bekhona. Ukudlala imidlalo yengqondo, ukwenza izinto ezingaqondakali, ukuza nokuhamba futhi nokuba nohlobo oluthile lwendlela yokuthola ithuba lokuthola umuntu othile ngoba uma ngikhethe ukubathanda, lapho-ke ngikufanele ukubuyisa okuthile. Lokhu kucabanga kunobuthi futhi kuncike ekubambaneni. Lapho sithanda ukuba nodonga lwethu luphakame, omunye umuntu ngeke akwazi ukungena endlini yethu. Kwesinye isikhathi sibeka izindonga phezulu kakhulu size singaboni nokuthi simvalele kanjani omunye umuntu ongakolunye uhlangothi. Ukunqoba yonke injongo yobudlelwano. Ngeke sithande ngaphandle kokuthembela. Uma kungekho ukwethenjwa, alukho uthando.
4. Ubudlelwano bumayelana nobumbano nokwakha inyunyana.
Ubudlelwano bami bokugcina bungifundise izinto eziningi kepha iningi lingifundise ukuthi uma ubumbano kungeyona inhloso, alikho iphuzu lokuthi uzoba nomunye umuntu. Okungukuthi, kungani ngashiya. Ngithathe isinqumo sokuhamba ngoba ngangizizwa ngingedwa kakhulu kunokuthi ngibe nomuntu. Ngemuva kokuba ngihambile, ngaba ne-epiphany, uma othile engithanda ngokweqiniso, kungani bangafuni ukuba nobunye nami? Futhi, uma kungenjalo, alikho iphuzu lokuba nabo. Ukuba nomuntu akufanele uzizwe sengathi ulwa naye ngokungaguquki, kufanele uzizwe sengathi umuntu okhethe ukuba naye ungasohlangothini lwakho; hhayi empini nawe.
Tagged: Hali Tsotetsi, life
Newer PostI’m ready
Older Post4 Reasons why it’s time to create a new paradigm of relationships, based on respect and love.